စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်မျက်လုံးမဟုတ်ဘဲ | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၂ တနင်္လာနေ့, မေလ 16, 2022 Douglas Karr
ကျောင်းဟောင်း မားကတ်တင်း သမားများသည် အမြဲလိုလို ချိတ်ဆွဲထားပုံရသည်။ မျက်လုံးအရေအတွက်။ ငါအမြဲတမ်းဒေတာဘေ့စနှင့်တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြစ်ခဲ့, ဒါကြောင့်ငါရတဲ့ကြိုက်တယ် မှန်သော သူတို့အားလုံး၏ရှေ့မှောက်၌ကြော်ငြာများကိုတွန်းပေးမည့်အစားမျက်လုံးများ။
အဝါရောင်စာမျက်နှာများကဲ့သို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်လည်းနံပါတ်များကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။ တစ်ချိန်ကဖတ်ခဲ့တယ် အမေရိကန်လူ ဦး ရေ၏ ၈၇% သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် Yellow Pages ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်. ပုံနှိပ်စာဖတ်ခြင်းတွင်၊ ၎င်းကို ဖုန်းစစ်တမ်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ယူဆခဲ့သည်။ တစ်စုံတစ်ဦးသည် သင့်အား ထိုကဲ့သို့ ဂဏန်းကြီးကြီးဖြင့် ပစ်သောအခါ မေးရန်လိုသော မေးခွန်းများစွာ ရှိသည်၊
စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည့်လူ ဦး ရေစာရင်းသည်အဘယ်နည်း။
Yellow Page မှမည်မျှပြောင်းလဲခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သနည်း အသုံး?
ထိုလူများသည်မည်သည့်လူ ဦး ရေအချိုးအစားကိုရောက်ရှိခဲ့သနည်း။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီ၏လူ ဦး ရေစာရင်းနှင့်ကိုက်ညီပါသလား။
ကြီးမားသော နံပါတ်များကို လျစ်လျူရှုထားခြင်း၊ Yellow Pages သည် ၎င်းအတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်။ အသုံးပြုသူသည် Yellow Pages ကိုဖွင့်သောအခါ၎င်းတို့သည်မစ်ရှင်တွင်ရှိနေပြီးထိုမစ်ရှင်သည်ကြော်ငြာရှင်နှင့်ထိတွေ့မှုရှိနိုင်သည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်အင်အားအကောင်းဆုံးအချို့ကိုပေးသည် ရည်ရွယ်ချက်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်“ အကောင်းဆုံး mp3 player” ကိုရှာပါကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသည့်အရာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်ဆုံးတွင် ၀ ယ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို blogging နေကြသည် - ကုမ္ပဏီများနှင့် စားသုံးသူများက ၎င်းတို့ကို ရှာဖွေနေသည့် သော့ချက်စကားလုံးများအတွက် ကောင်းမွန်သော ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နေရာချထားမှုဖြင့် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန်။
Internet Yellow Pages (IYP) သည် အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ ဤလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များသည် ကြီးကျယ်သော ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နေရာချထားမှုနှင့် ဂဏန်းကြီးများကို ရည်ညွှန်းသည်။ ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ချက်မှာ IYP သည် သင့်လုပ်ငန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် ဦးတည်ချက်တစ်ခု၏စွမ်းရည်ကို အမှန်တကယ် မှေးမှိန်စေသည်-
သင့် site ကိုသွားပါ
IYP တွင်နေရာချထားရန်သင်ဝယ်ယူသောအခါ၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ထက် IYP ကိုသင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ပိုင်ရှင်နှင့်တံခါးပေါက်အဖြစ်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင်ရှာဖွေသူရိုးရိုးလေးမရပါ Search, Land နှင့် Convert - သူတို့သည်လမ်းညွှန်လမ်းညွှန်ရှိရမယ်။ သုံးစွဲသူနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်စကားဝိုင်းများကိုဆုံးရှုံးကြသည်။
ရိုက်ယူခြင်း ရည်ရွယ်ချက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်၊ အရေအတွက်ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ဘဲ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် လူမှုကွန်ရက်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်း သံသယရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ Facebook ကတစ်ဆင့် စီးပွားရေးအောင်မြင်ဖို့ ပြောနေကြသူတွေ အများကြီးပါ။ အဲဒီမှာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ဆိုတာ သံသယမရှိပေမယ့် ဧည့်သည်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သံသယရှိမိပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက် ဝယ်ယူရန်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အခွင့်အလမ်းများသည်အကြီးမြတ်ဆုံးသောနေရာတွင်သင်၏စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ဦး စား ပေး၍ ပြောပါ။
သင့်အွန်လိုင်းစတိုးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းမွန်သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နေရာချထားမှုဖြင့် စတင်ပါ။
အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဗျူဟာများကို ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်ပါ။ အီးမေးလ်စျေးကွက် နှင့် မိုဘိုင်းစျေးကွက်.
သင်၏ ၂၀၀၉ စျေးကွက်မဟာဗျူဟာတွင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များထားရှိပါ
ဇန်နဝါရီလ 28 ရက် 2009 ခုနှစ် ညနေ 11 နာရီ 59 မိနစ်
ဆောင်းပါးတွင် အတိအကျ မပြောထားသော်လည်း ဤစစ်တမ်းသည် HOME တယ်လီဖုန်းများသာ အကျုံးဝင်ကြောင်း လောင်းကြေးထပ်လိုပါသည်။ အိမ်သုံးတယ်လီဖုန်းမရှိသူများ သို့မဟုတ် ထိုသို့သော စစ်တမ်းများကို ဂရုမစိုက်သော လူအမျိုးအစားများကို ဖယ်ထုတ်ထားခြင်းမှာ ထင်ရှားပါသည်။ ဒါဟာ စစ်တမ်းရဲ့ နောက်ဆုံးရလဒ်ကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲစေတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ 29, 2009 မှာ 12: 36 AM
ငါမင်းကို James သဘောတူတယ်။ အွန်လိုင်းလူဦးရေစာရင်းမှာ အိမ်ဖုန်းမရှိ၊ အိမ်ဖုန်းမဖြေတာ ဒါမှမဟုတ် စစ်တမ်းပြီးတဲ့ နာရီပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အလုပ်မှာဆိုတော့ အမြဲတမ်း 'တယ်လီဖုန်းစစ်တမ်း' တွေကို လွမ်းနေမိပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလ 29 ရက် 2009 ခုနှစ် ညနေ 12 နာရီ 12 မိနစ်
Yellow Pages တယ်လီဖုန်းစစ်တမ်းအတွက် အသုံးပြုသည့် နည်းစနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ သင့်မေးခွန်းများကို ကျွန်ုပ်ဖြေနိုင်မည်ဟု ထင်ပါသည်။
နှစ်သစ်ကူး၊ ကျေးဇူးတော်နေ့ နှင့် ခရစ္စမတ်တို့မှလွဲ၍ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အင်တာဗျူးများကို ပြုလုပ်ပါသည်။
အသုံးပြုသည့်နည်းစနစ်သည် ကျပန်းဂဏန်းခေါ်ဆိုမှုဖြစ်ပြီး ဆိုလိုသည်မှာ ကြိုးဖုန်းဖုန်းနံပါတ်တိုင်းသည် စစ်တမ်းအတွက် ရွေးချယ်ခံရရန် တူညီသောအခွင့်အရေးရှိသည်။ ဤနည်းစနစ်သည် US အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူထုတစ်ရပ်လုံးအတွက် မှန်းဆနိုင်သောနမူနာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
Yellow Pages ကိုရည်ညွှန်းသည်ဟုပြောသောလူများ၏ 86% ကသူတို့သည် ၀ ယ်ယူထားပြီးဖြစ်သည်သို့မဟုတ်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းပြောခဲ့သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၁ ဒေါ်လာတိုင်းအတွက် ဒေသတွင်း ကြော်ငြာကြော်ငြာမှ ပျမ်းမျှပြန်အမ်းငွေမှာ ၁၃ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
စစ်တမ်းကို စီမံခန့်ခွဲပုံကြောင့်၊ ရောက်ရှိခဲ့သည့် လူဦးရေစာရင်းသည် အမေရိကန် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ လူဦးရေကို ထင်ဟပ်စေသည်။ ပုံမှန် Yellow Pages အသုံးပြုသူသည် အသက် 25-49၊ ကောလိပ်ကျောင်းသူ၊ HH ဝင်ငွေ > $60K၊ မိသားစုအရွယ်အစား >4၊ ပြီးခဲ့သောနှစ်တွင် 3+ ကြိမ် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ လက်ရှိတည်နေရာတွင် တစ်နှစ်အောက် နေထိုင်ပါသည်။
အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ လမ်းညွှန်တစ်ခုဖွင့်ပြီး တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော ကြော်ငြာများကို ကြည့်ရှုသူဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီလ 29 ရက် 2009 ခုနှစ် ညနေ 12 နာရီ 19 မိနစ်
Wow – ဒီ Larry ရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ 29, 2009 မှာ 11: 34 AM
ကျွန်တော်လည်း သဘောတူပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအင်စတီကျုတွင်ဤနေရာတွင်ဆင်တူသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အွန်လိုင်း အခွင့်အလမ်းများကို ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းသည် သွားရမည့်လမ်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်တောင် ရခဲ့တယ်။ စုံစမ်းသည်: http://infomarketingstarter.blogspot.com/